Nweta mmụọ nsọ mana esorola usoro | Martech Zone
Sunday, Eprel 6, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu a, m na-agụ Starbucked, nke Taylor Clark dere, na nkwadebe maka Indianapolis Business Book Club. Taylor Clark meghere akwụkwọ ahụ na-ekwu maka Starbucks n'oge mbido na otu o si bụrụ onye mmeghe anya mgbe Starbucks mepere Starbucks ọhụụ n'okporo ámá - ụlọ ahịa abụọ ahụ bụ ụlọ ahịa na-ekwenyekarị na sarkar.
Ọ kpaliri m ide post a n'ihi na echere m na e nwere 'omume kacha mma' mana n'ezie enweghị usoro na azụmaahịa ịga nke ọma. Aga m ede ihe banyere nke a Afọ nke Mkparịta ụka 2, mana mkparita uka 'ị ga-aga nke ọma' ị na-achọta na weebụ na-ewute m nke ukwuu. M na-ezere ịkwado ma ọ bụ na-ede blọgụ na blọọgụ na-anwa ịbupụta ihe niile na usoro. Enweghị usoro.
Ihe dị na ntanetị nwere ọtụtụ mmụọ nsọ!
Ikekwe naanị usoro maka ịzụ ahịa bụ n'ezie ịkọwa ọdịiche dị n'ihe niile ị na-eme… na okwu ndị ọzọ, zere usoro ahụ. Ewuberela m ozi mmemme na-ezi ozi maka ndị ahịa kwesiri ịbawanye ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ọnụọgụ nzaghachi. Ihe data ahụ dị irè, nkewa ahụ enweghị oke njehie, mbipụta ya na nhazi ya dabara na 'usoro' niile, anyị nwekwara ụfọdụ ndị ama ama tụpụrụ mmetụta ha na ihu / ihu na mgbanaka - mana mkpọsa ahụ gbara bọmbụ. .
Site na ịgbaso usoro ahụ, ọ nweghị ihe dị iche na mkpọsa na narị otu narị ma ọ bụ puku puku mkpọsa ndị ọzọ na-agbaso otu iwu. Ya mere - mkpọsa ahụ mebiri na ndị ọzọ nke usoro mkpọsa ahụ, na mkpofu.
Mee Ihe Na-adịghị. Emela ihe ndị Do
Kedu ihe kpatara ụwa ga - eji blọọgụ wepụta ike dị na weebụ? Fọdụ ndị folks chere na ọ bụ n'ihi na ọ bụ oke oke, oke ọdịnaya, yana nka ndị blogger na-eweta. M n'aka na ndị na-akpa… ma na ọ bụghị ihe niile nke ya.
Akụkụ nke ihe na-eme ka blog bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ bụ ka ha ghara ịdị na-agbaso ụkpụrụ akwụkwọ akụkọ. Gersfọdụ ndị na-ede blọgụ na-awụli elu pusi na-alụ ọgụ na asọmpi ahụ. A blog na eme blọọgụ ego gbasara iri ezigbo nri. Mgbe ụfọdụ achọrọ m ikwu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okwukwe (ọ na-afọ obere ka ọ bụrụ na ị na-aza azịza ọjọọ).
Blọọgụ na-enye ọdịnaya na njirimara, ihe anaghị emetụ ya ma a bịa n'ịde blọgụ ụlọ ọrụ.
Cheta mgbasa ozi Snapple ama ama sitere na afọ gara aga? Ojiji nke Wendy Kaufman, Snapple Lady, mere ka ire Snapple site na 23 nde dollar kwa afọ ruo 750 nde kwa afọ na 1995. Wendy na-aza akwụkwọ ozi ndị na-akwado Snapple na oge nke ya, ndị ọrụ ahụ chere na ọ ga-abụ nnukwu ụzọ iji kwalite ika. Mgbasa ozi ndị ahụ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma!
Quaker weghaara, Wendy hapụrụ ya, ya niile wee rịa kaput… na-agbaso usoro ahụ! Quaker mechara daa na hapụ Snapple ka ọ laa. Ugbu a Wendy bụ onye mmekọ na Wendy Uwe - tinyere ihe eji eme ihe maka ụmụ nwanyị, akwalite site na blọọgụ n'ezie!
Laghachi na isi m - jiri web wee kpalie onwe gị na ịchọta echiche ọhụrụ banyere ihe ndị mmadụ na-eme iji zụọ ahịa ngwaahịa ha. Esola usoro ahụ… nnwale! Mee usoro nke gị!
M na-eche ikpeazụ ikpe - “Mee ka gị onwe gị na usoro!” - bụ nke kachasị mkpa. N’asụsụ azụmahịa, a kpọrọ ya omume kacha mma. Ihu ọma, chọta ihe na-arụ ọrụ, tweak ya, wee were ya dịka usoro eji arụ ọrụ. Nke a bụ ihe Starbucks mere.
Ha were nkuzi nke Henry Ford banyere imepụta igwe mmadụ, wee jiri ya mee ihe ha chọrọ (“can nwere ike inwe agba ọ bụla ịchọrọ, ọ bụrụhaala na ọ bụ ụda ụwa”), nke mere ka ha nwee ọganiihu n'echiche na ego akwụgoro, ha nwere ike na-achịkwa ahụmịhe ndị ahịa, ma na-eme naanị ihe ndị ahụ mere ka ha nwee ọganiihu na-enweghị ọtụtụ ịkọ nkọ na ịnwale ihe ndị nwere ike ịda.